Mandry tsy lavo loha ny Malagasy, na ireo tantsaha any ambanivolo izany, na ny vahoaka ety an-drenivohitra. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ka lasa sakana amin’ny famokarana sy fampandrosoana izany, na ho an’ireo tantsaha izany na ho an’ireo mpandraharaha.
Miaina ao anatin’ny krizy sosialy sy ara-toekarena tanteraka ny firenena, latsaka ao anatin’ny fahantrana lalina ny ankamaroan’ny vahoaka Malagasy, hoy ny RMDM. Ny tena olana, hoy ity farany dia “tsy laharam-pamehena ho an’ny mpitondra ny miady amin’ny fahantrana” fa dia ny “fisehosehoana ivelany sy ny fampanantenana poakaty tsy misy farany no betsaka”.
RMDM dia najoron’ireo antoko 21 izay tsy mitovy hevitra sy fomba fijery amin’ireo mpitondra amin’izao fotoana izao tamin’ny 6 Aogositra 2019. Mitsangana manaraka ny Làlampanorenana sy ny làlana laharana 2011-013 momba ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra tamin’ny 9 Septambra 2011.